Faadumo Dayib Oo Takoor Uga Tagtay Shaqadii QM ay uga Haysay Soomaaliya (Warbixin) – Idil News
NEW YORK(IDIL NEWS)–Fadumo Dayib, oo Hoey u soo Noqotay Musharax Madaxweyne ayaa daboolka ka qaadday sababta ay uga Rukhseysatay Shaqadii Qaramada Midoobay ay uga heysay Soomaaliya, Waxa ay Sarkaal Jumciyadda Qurumaha ka dhaxeysa ka tirsan ku Eedeysay Soomaali Takoor.
Qoraallo is-dabajoog ah oo ay soo dhigtay tirsigeeda Twitter-ka ayey Haweeneydan Soomaalida ah waxa ay Saraakiil sare oo QM ah ku eedeysay dhaqan Takoor oo ka dhan ah Hawlwadeennada Soomaalida ah ee UN-ta.
Faadumo Dayir ayaa sii raacisay Qoraalkeeda “Tani waa Soomaaliya, si la mid Soomaalida kale ee heysta jagooyinka takhasuska ah ee caalamka ayaa sidoo kale loo sheegay inay si nidaamsan ku banneeyaan. Waxa aan leenahay dhalashooyin kala duwan, dambigeenna kaliya waxaa weeye Isirkeenna. Kolka yaa la cunsuriyeynayaa?”.
Fadumo Dayib ayaa gashay tartanka Doorashada Madaxtooyada Soomaliya 2016, balse goor dambe ayey isaga hartay, iyadoo sheegtay in doorashadu tahay mid aan caadi ahayn.
Faduma Dayib oo ah 46 jir, goor dambe ayaa loo magacaabay maamulaha QM Arrimaha haweenka ee dalka Soomaaliya, Iyadoona hada Ka Ruqsaysatay sababo la xariira Takoor lagu hayo Soomaalida ka Howl-gasha Xafiisyada kala duwan ee Qaramada Midoobay.